BBC Learning English - Course: Essential English Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 14 / Activity 1
Namoota waa’ee ijoolleesaanii akka itti gaafattu hubachuuf caqasi.
Yooyyaa!, Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caalii dha. Kutaa kana keessatti, namoonnii daa’imman/ijoollee qabaachuusaanii/godhachuusaanii akka ittigaafatan baratta. Namoonni lama waa’ee daa’immansaanii wayita waliin dubbatan caqasi.
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.Jalqaba, Deebiin, ‘Daa’imman wahii godhattee? Jechuun Mikaa’eliin gaafatte’ "do you have any children?" Namni tokko daa’imman/ijoollee meeqa akka qabu wayita gaafattu, gaalee ‘do you have’ booda ‘any’ fayyadamuu qabda. Caqasiitii irradeebi’i.
Ittaansuudhaan Mikaa’eel, Eeyee, ilma tokko qabna’ “Yes, we have a son.’ jedhe. ‘Yes, we have…’ jedhe; akkasumas ijoollee dhiiraa meeqa akka qabu ibse. Ilmaafi intala qabaachuullee dubbachuu dandeessa.
Sana booda Deebiin, ‘Umriin isaa hangami?’ "How old is he?" jettee Mikaa’eel gaafatte. ‘He’ fayyedamuunshii wantichi ilma waan bakka bu’uufi. Haata’u malee, Mikaa’el ilmaafi intala qabaateera osoo ta’ee, Deebiin gaafiishii keessatti ‘they’ fayyadamti ture; akkasumas Mikaa’eel intala takka qofa qaba otoo ta’ee Deebiin gaafiishii keessatti ‘she’ fayyadamti ture. Caqasiitii irradeebi’i.
Dhumarratti, Mikaa’eel, ‘Ilmi keenya umrii waggaa shanii qaba’ "Our son is five." Jedhe. Mikaa’eel umrii ilmasaatii “our son is…” jedhee akkasumas lakkoofsa umrii ilmasaa gitu itti ida’uudhaan Deebiitti hime.
Dansa -Ammammoo namoonni garagaraa daa’imman godhachuusaanii wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette sirreeffadhu/mirkaneeffadhu.
Gaarii! Afaan Ingilizii hangam akka dansaa yaadachuukee haa’ilaallu. Himoota afaankeetii caqasiitii Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.
Daa’imman wahii qabdaa/godhattee?
Eeyee, ilman qabna.
[Inni] Umriinsaa meeqaa/hangamii?
Ilmi keenya umriinsaa waggaa shan.
Misha -Tole, amma waa’ee daa’immankeetii akka itti dubbattu beekta. Deebiif deebisuudhaan shaakali.
Dansa, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi
Hojii gaarii! Amma namoota waa’ee ijoolleesaanii gaafachuus ta’e waa’ee ijoollee mataa keetii dubbachuu dandeessa.Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii shaakali. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuutiif yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!
Jechoota tartiiba sirrii ta’een kaa’uudhaan waan hanga yoonaatti baratte mirkaneeffadhu.
Gaafiin kun namoonni ijoollee qabaachuusaanii gaafata.
Eeyee, ilma tokkon qabna.
Intalli keenya umriinshii ganna torba ta’uu dubbachuu barbaanna.
Ijoollee wahii qabdaa?
Eeyee, intala tokkon qabna.
[Inni/Ishiin] Umriin isaa/shii meeqa?
Ilmi keenya ___dha.